यसरी हुँदैछ लोकतन्त्रको मानमर्दनः पूर्वराष्ट्रपतिको सुरक्षामा ३० सुरक्षाकर्मी, तर पूर्वराजालाई ९६ प्रहरीको पहरा - छापा खबर - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
काठमाडाैँ बैशाख ११
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सुरक्षामा ३० जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षाका लागि भने तीन गुणाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ।
पूर्वराजाको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलबाट दुई डिएसपी खटिएका छन् । एक डिएसपीको नेतृत्वमा ४० प्रहरीले पूर्वराजाको ‘क्लोज सर्किट’मा काम गर्छन् । सइको कमान्डमा नागार्जुननिवासको सुरक्षामा १५ जना खटिएका छन् । त्यस्तै पूर्वराजाको निजी निवासको सुरक्षामा अर्का डिएसपीको नेतृत्वमा ४१ प्रहरी खटिएका छन् ।
यता पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सुरक्षामा सेनाको एक प्लाटुन र दुई प्रहरी खटिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिभन्दा पूर्वराजालाई उच्च सुरक्षा दिनु गणतन्त्रकै मर्मविपरीत भएको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा पनि पूर्वराजालाई २०–२५ जना प्रहरी पर्याप्त हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।
पूर्वराजाको सुरक्षाका नाममा राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीलाई अनावश्यक रूपमा खटाइएको भन्दै संसद्को सुशासन समितिले संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, तीन वर्षसम्म सो निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन ।
पूर्वराष्ट्रपतिभन्दा पूर्वराजाको सुरक्षामा धेरै सुरक्षाकर्मी खटाउनु अनावश्यक भएको गृह मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ०६५ मा गणतन्त्र घोषणालगत्तै सरकारले सुरक्षा मूल्यांकनका आधारमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाएको थियो । हालसम्म पुनरावलोकन भएको छैन ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी विशिष्ट सुरक्षा कार्यविधिअनुसार नै पूर्वराजालाई सरकारले सुरक्षाकर्मी खटाएको बताउँछन्।
‘कार्यविधिअनुसार विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आवश्यकताअनुसार नै पूर्वराजालाई सुरक्षाकर्मी खटाइएको हो,’ प्रवक्ता सुवेदीले बताए । गृहले हालै नयाँ कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । जसमा पूर्वराजालाई खटाइएको सुरक्षाकर्मी घट्ने सम्भावना रहेको एक अधिकारीले बताए ।
प्रकाशित ११ बैशाख २०७६, बुधबार | 2019-04-24 07:25:31